UDonald Trump uyaqhubeka nokucabanga ngokuthi angahoxa yini Esivumelwaneni saseParis noma cha | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMongameli waseMelika, uDonald Trump, wakhethwa okhethweni olwedlule. Njengoba sike sabonisana ngokuthunyelwe kwangaphambilini, le ndoda ayikholelwa ekushintsheni kwesimo sezulu, ngoba icabanga ukuthi "yinto yamaShayina yokwandisa ukuncintisana". Uvele waxwayisa embhalweni wakhe wokuthi uma engakhethwa ukuba ngumongameli waseMelika uzokhipha yonke imali ekhona yezinkinga zokuguquguquka kwesimo sezulu.
Isivumelwano saseParis siqale ukusebenza ngoNovemba 4 kulo nyaka, sizama ukunciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa emhlabeni jikelele futhi kungena esikhundleni seKyoto Protocol yangaphambilini. Kodwa-ke, uDonald Trump usazibuza ukuthi ngabe uzophuma yini esivumelwaneni saseParis sokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Isizathu esiyinhloko sokukhetha ukuhoxa yingoba ucabanga ukuthi ukuhlala Esivumelwaneni saseParis kuzoba "Thobelani imithetho ebeka engcupheni yokulahlekelwa ukuncintisana kwezomnotho emazweni athuthukile njengeChina."
Enkulumweni exhunywe kwinethiwekhi yethelevishini Fox News Uveze ukuthi usacubungula umqondo wokukwazi ukuphuma Esivumelwaneni saseParis kwazise simelela ukungabi bikho kokuncintisana uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Kodwa-ke, noma uDonald Trump nakanjani efuna ukuphuma eSivumelwaneni saseParis, bekungeke kube lula kangako kuye. Ngoba lesi Sivumelwano sihlanganisa isinqumo sokunciphisa amagesi abamba ukushisa kusuka ku- Ngaphezu kwamazwe we-100, njengoba iqinisekisiwe, iqukethe umushwana ongakuphoqa ukuthi ulinde cishe iminyaka emine kusukela lapho nginqume ukuwushiya.
Yize bekhona bonke ososayensi nezifundo eziveze imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu futhi ezikhulayo ngenxa yokwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba, uyaqhubeka nokugcizelela ukuthi "akekho owazi ngempela ukuthi kwenzekani ngokushintsha kwesimo sezulu." Kepha kufanele sisho ukuthi ukubekile ukuthi unakho "ukuba nomqondo ovulekile" ukuze uqhubeke kulesi Sivumelwano.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » UDonald Trump uyaqhubeka nokucabanga ngokuthi angahoxa yini Esivumelwaneni saseParis noma cha